Jizọs Akpọlite Nwa Otu Nwaanyị Nen Di Ya Nwụrụ | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
ISI NKE 37
Jizọs Akpọlite Nwa Otu Nwaanyị Di Ya Nwụrụ
JIZỌS AKPỌLITE MMADỤ N’ỌNWỤ N’OBODO NEN
Obere oge Jizọs gwọchara onye ahụ na-ejere otu onyeisi ndị agha ozi, Jizọs si na Kapaniọm gbadawa obodo Nen, nke dị kilomita iri atọ na abụọ ma e si Kapaniọm gawa ya. Ọ bụghị naanị ya gawara. Ndị na-eso ụzọ ya na ìgwè mmadụ so ya. O yiri ka ọ̀ bụ ná mgbede ka ha rutere ná mpụga obodo Nen. Mgbe ha ruru ebe ahụ, ha hụrụ ọtụtụ ndị Juu na-aga ili ozu. Ha si n’ime obodo buru ozu otu nwa okorobịa na-aga ka ha lie ya.
Onye kacha eru uju n’ime ha bụ nne nwa okorobịa ahụ. Ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ, ugbu a kwa, naanị otu mkpụrụ nwa o nwere anwụọla. Mgbe di ya nwụrụ, ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, ya na nwa ya nwoke ọ hụrụ n’anya ka nọ. Chegodị otú nwa ya nwoke a si dịrị ya n’obi n’ihi na ọ bụ ya bụ olileanya o nwere. Ugbu a, nwa a anwụọkwala. Ònyezi ka ya na nwaanyị a ga na-anọ, ònyekwa ga na-enyere ya aka?
Mgbe Jizọs hụrụ nwaanyị a, oké mwute nwaanyị a nọ na ya na uju ọ na-eru wutere ya. Jizọs weturu obi ma gwa nwaanyị ahụ okwu mesiri ya obi ike. Ọ sịrị ya: “Kwụsị ịkwa ákwá.” Ọ bụghị naanị okwu ka Jizọs kwuru. Ọ garuru nso bitụ ihe e ji buru ozu nwa okorobịa ahụ aka. (Luk 7:13, 14) Otú o si mee ihe ahụ mere ka ndị ahụ bu ozu na ndị ha na ha so kwụsị ozugbo. Ọtụtụ ndị ga na-eche ihe ihe a o mere pụtara nakwa ihe ọ na-aga ime.
Gịnịkwanụ banyere ndị ahụ ha na Jizọs so, ndị hụrụla ka ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ ebube, na-agwọkwa ọrịa dị iche iche? O nwere ike ịbụ na ha ahụtụbeghị Jizọs ka ọ kpọlitere mmadụ n’ọnwụ. Ọ bụ eziokwu na e nweela ndị a kpọlitere n’ọnwụ n’oge dị anya gara aga, ma Jizọs ọ̀ ga-emeli ụdị ihe ahụ? (1 Ndị Eze 17:17-23; 2 Ndị Eze 4:32-37) Jizọs kwuru n’olu dara ụda, sị: “Nwa okorobịa, ana m asị gị, Bilie!” (Luk 7:14) Ihe ahụ o kwuru mekwara. Nwoke ahụ nọọrọ ọdụ ma malite ikwu okwu. Ihe a tụrụ nne ya n’anya, obi abụrụkwa ya sọ aṅụrị. Jizọs kpọọrọ ya kpọnye nne ya. Nwaanyị ahụ anọghịzi naanị ya.
Mgbe ndị mmadụ hụrụ na nwa okorobịa ahụ adịla ndụ n’eziokwu, ụfọdụ malitere ito Jehova Onye Na-enye Ndụ, sị: “E mewo ka onye amụma dị ukwuu bilie n’etiti anyị.” Ndị ọzọ ghọtakwara ihe ọrụ ebube a Jizọs rụrụ pụtara. Ha sịrị: “Chineke echewo ihu ya n’ebe ndị ya nọ.” (Luk 7:16) Akụkọ banyere ihe a dị́ ịtụnanya merenụ gazuru obodo ndị dị gburugburu ebe ahụ ozugbo, ma n’obodo Jizọs bụ́ Nazaret, nke dị kilomita iri site n’ebe ahụ. Akụkọ a rutechadịrị Judia dị n’ebe ndịda.
Jọn Onye Na-eme Baptizim ka nọkwa n’ụlọ mkpọrọ. Ọ chọkwara ịma banyere ọrụ ndị Jizọs na-arụ. Ndị na-eso ụzọ Jọn kọọrọ ya banyere ọrụ ebube ndị a. Gịnị ka Jọn mere mgbe ọ nụrụ banyere ọrụ ebube ndị a?
Gịnị nọ na-eme ka Jizọs na-abịaru obodo Nen nso?
Olee otú ihe Jizọs hụrụ si metụ ya n’ahụ́, gịnịkwa ka o mere?
Gịnị ka ndị mmadụ mere mgbe ha hụrụ ihe Jizọs mere?
Gịnị Bụ Mbilite n’Ọnwụ?
O nwere ike ịtụ gị n’anya ma ị nụ ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ n’ọdịnihu.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Akpọlite Nwa Otu Nwaanyị Di Ya Nwụrụ
jy isi 37 p. 94-95